Semalt: Iiklasi Zokukhishwa Kweenkonzo (DoS) Ukuhlaselwa
Ukuhlaselwa kwe-DoS yimizamo enobungozi yokwenza iiservisi zakho okanye izixhobo zonxibelelwano azifumaneki okwesikhashana okanye ngokusisigxina. AbaHackers bafezekisa lo msebenzi ngokwenza iinkonzo ezahlukeneyo. Ngenxa yoko, banokumisa okanye ukuphazamisa ii-akhawunti zakho ngexesha lokuphila. Ukuhlaselwa kweNkonzo yeNkonzo ngokuqhelekileyo kubandakanya uluhlu lwamashishini axhatshaziweyo asetyenziswe ukujolisa kwiikhomputha ezintsha kunye nezixhobo zeselula. Olu matshini lubangela ukukhuseleka okuhlukeneyo kunye nokukhukula izibonelelo ezijoliswe kuzo ngokuqhubekayo izicelo, imibuzo kunye nemilayezo engafunekiyo. Ukuhlaselwa kwe-DoS kunokuchaphazela kakhulu izixhobo zakho kwaye zivame ukubulawa njengeebhotile - virtualization in small business.
U-Andrew Dyhan, uSemalt uMphathi weNtengo yabaThengi, uthi ukuhlaselwa kwe-DoS kuhlulwe ngamacandelo amabini ahlukeneyo:
1. Uhlaselo lwe-DoS lwesalathisi
Olu hlobo lokuhlaselwa kwe-DoS lubandakanya izikhukula ze-HTTP, ukuhlaselwa kwe-zero-zay okanye ukuhlaselwa ngokukhawuleza (iSlowloris okanye i-RUDY). Olu hlaselo lwe-DoS lujolise ekubangela iingxaki kwinani elikhulu leenkqubo zokusebenza, iinkqubo zokunxibelelana kunye nezicelo zewebhu. Babonakala bengenacala kwaye bavumelekile, kwaye izicelo zikhangeleka zithembekile, kodwa ubukhulu babo bulinganiswa ngesimo sesicelo ngesibini..Olu hlaselo lwe-DoS lujolise ukugqitywa kwezicelo ezijoliswe kuzo kunye nezicelo ezininzi, kubangele imemori ephezulu kunye nokusetyenziswa kwe-CPU. Ekugqibeleni uya kuphawula okanye ukuphazamisa izicelo zakho zekhompyutha.
2. Uhlaselo lwe-DoS lwesalathisi
Uhlaselo lwe-DoS lwamanethiwekhi luququzelelo lwe-UDP, isikhukhula se-SYN, ukuphakanyiswa kwe-NTP, ukukhuliswa kwe-DNS, ukuphuculwa kwe-SSDP kunye nokuhlukana kwe-IP. Lawa onke amabhadu aphezulu kwaye alinganiswa kwiigigabits ngesibini. Baye balinganiswa ngendlela yeepakethi ngomzuzwana kwaye bahlala beqhutywa yiikhompyutha ze-zombie okanye iibhenets.
Uhlaselo lweDoS lusasazeka njani?
Abaxhasi be-cybercriminals bafuna ukuphazamisa nokulawula amaninzi ukuya kumawaka, kuquka nezigidi ze-smartphones kunye neekhomputha. Bafuna ukwenza njengabaphathi be-Zombies okanye amanethiwekhi e-botnet kwaye bahambise ukuhlaselwa kwe-Distributed Denial of Service (DDoS), iiprogram ezinkulu zogaxekile kunye nezinye ukuhlaselwa kwe-cyber. Kwezinye iimeko, i-cybercriminals iseka inethiwekhi enkulu yamaZombi kunye nomatshini osulelekileyo ukufikelela kwiinkcukacha ezintsha kunye nezixhobo, njengokuba kuthengiswa ngokuthe ngqo okanye kwindlu yokuqashisa. Abakwa-spammers bangabhawula kwaye bathenge amanethiwekhi ekusebenziseni amaphankaso ahlalutyo amakhulu.
Ii-botnets ze-DoS kunye nezixhobo zabo:
Umdali we-botnet ubizwa ngokuba ngumgcini webhodi okanye u-botmaster. Ulawula i-DoS bots kwiindawo ezikude kwaye ubela imisebenzi ethile imihla ngemihla. Abaxhasi be-botmasters baqhagamshelana ne-DoS iseva ngeendlela ezifihliweyo ezifana neziprotocols, i-HTTP iiwebhusayithi kunye ne-IRC amanethiwekhi. Ungasebenzisa kwakhona ii-media media ezifana ne-Twitter, i-Facebook kunye ne-LinkedIn ukuze udibanise nabanye.
Ii-server ze-botnet ziyakwazi ukuthetha okanye ukusebenzisana neenethiwekhi zeDoS nakwezinye iinkonzo ze-botnet, ukudala inethiwekhi esebenzayo ye-P2P elawulwa yiengcali enye okanye ezininzi ze-bot. Kuthetha ukuba nabani na ongeke anike imiyalelo kwinethiwekhi ye-DoS njengoko ukuhlaselwa kunemvelaphi emininzi kwaye abaqhayisayo kuphela bazi malunga nemvelaphi yabo. I-bots ye-DoS ifihliwe emva kweenkonzo ezingenangqiqo kwaye zenzele ukubonelela abathengi bazo ngeetekkthi eziphezulu, ezingenanto nto.